Yintoni Eyathatha Ukuba "Uhlobo Oluhle"?
Kuthatha ukuthini ukunyaniseka? Nangona kaninzi kuphakanyiswa, umgaqo wokunyaniseka unzima kakhulu. Ukujonga ngokukhawuleza, yinto engqiqweni yokuthembeka. Makhe sibone ukuba kutheni.
Ngelixa kunokuba lunzima ukuchaza ukunyaniseka njengokuthetha inyaniso kunye nokuthobela imithetho , le ngumbono ogqithiseleyo kunengcamango yeengcamango ezinzima. Ukuxelela inyaniso - inyaniso yonke - ngamanye amaxesha ngokuqhelekileyo kwaye akunakwenzeka ukuba akunakwenzeka kunye nokuziphatha okungafunekiyo okanye kwanokuba kakubi.
Masithi umlingane wakho omtsha ucela ukuba uthembeke malunga nento oyenzile ngeveki edlulileyo, xa wawuhlukana: ngaba oku kuthetha ukuba kuya kufuneka uxelele yonke into oyenzile? Akukhona nje kuphela ukuba unganakho ixesha elaneleyo kwaye awuyi kukukhumbula zonke iinkcukacha; kodwa ngokwenene, yonke into efanelekileyo? Ngaba nawe ufanele uthethe ngeqela elimangalayo oluququzelela kwiveki ezayo kumlingane wakho?
Ulwalamano oluphakathi kokunyaniseka nenyaniso lubuqili. Yintoni inyaniso ngomntu, kunjalo? Xa ijaji licela ubungqina ukuba lixelele inyaniso malunga noko kwenzekayo ngaloo mini, isicelo asikwazi ukuba nayiphi na into ethile, kodwa kuphela ezifanelekileyo . Ngubani oza kuthetha ukuba yiziphi iinkcukacha ezifanelekileyo?
Ukunyaniseka kunye nokuzimela
Lezo zimbalwa zichazwe kufuneka zanele ngokwaneleyo ubudlelwane obunzima obuphakathi kokunyaniseka nokuzakhela . Ukunyaniseka kubandakanya amandla okukhetha, ngendlela enokubaluleka komxholo, iinkcukacha ezithile malunga nokuphila kwethu.
Okona kuncinci, ukunyaniseka kudinga ukuqonda indlela izenzo zethu ezenza ngayo okanye ezingahambelani kwimigaqo kunye nokulindela kweminye-apho oku kuvela khona nawuphi na umntu esiziva sibophekile ukuba sixelele, kuquka nathi.
Kodwa kukho ulwalamano phakathi kokunyaniseka nokuzimela.
Ngaba uthembekile kuwe? Lo ngumbuzo omkhulu, awuxoxwanga kuphela ngamanani afana nePlato neKierkegaard, kodwa nakwi- David Hume "Ukholo lobuNkokeli." Ukunyaniseka kwethu kubonakala ngathi yingxenye ebalulekileyo yento efunekayo ukuba ibe yinyani: kuphela abo bangakwazi ukuzijongana nabo, kuzo zonke izinto zabo ezibonakalayo, kubonakala bekwazi ukuhlakulela into eyinyani kuye-ke, iyinyani.
Ukuba ukunyaniseka akuchazi yonke inyaniso, yintoni na? Enye indlela yokuyichaza, ngokuqhelekileyo yamukelwa ngokwemigaqo yokuziphatha (eso sikolo sokuziphatha esiye savela kwiimfundiso zika-Aristotle ), senza ukunyaniseka isimo. Nantsi ihamba ngokunikela kwam isihloko. Umntu uthembekileyo xa enesimo sokujongana nomnye ngokucacisa zonke iinkcukacha ezichaphazelekayo kwincoko ekhoyo.
Isimo esicatshulwayo ngumthambo, oye wahlwaywa ngokuhamba kwesikhathi. Okokuthi, umntu onyanisekileyo nguye oye wakhula umkhwa wokuzisa phambili kwezinye iinkcukacha zobomi bakhe obonakala bubalulekile ekuxoxaneni nomnye. Ukukwazi ukuqonda oko kuthethwa yiyona nxalenye yokwethembeka kwaye, ukuba kunjalo, ukuba isakhono esinzima esinokuyithatha.
Nangona i-centrally in life in general and ethics and philosophy of psychology, ukunyaniseka akuyona inkalo enkulu yophando kwiingxoxo zefilosofi zanamhlanje. Nantsi kunjalo, ezinye iindawo ezinokuba luncedo ekubonakaliseni ngakumbi kwimingeni eyenziwa ngumcimbi.
Ukungena kwiimpawu zokuziphatha kwiStanford Encyclopedia of Philosophy , apho umzekelo wokunyaniseka uvela ngamaxesha ambalwa.
UDavid Hume "Uthembekileyo Wefilosofi", icandelo elifutshane eliqaqambileyo, lidla ngokulibala.
Imfazwe Yehlabathi II: iMfazwe yesithathu yeKharkov
Indlela yokususa uMold kwiPayipi
Indlela yokuwa kwiqhwa ngaphandle kokubuhlungu
I-Gasoline iGallon Equivalents (GGE)